Kudingidwe olwamanzi e-Willow | News24
Kudingidwe olwamanzi e-Willow
ISITHOMBE: sigciniweAmalunga omphakathi asebenzisa iloli lamanzi mihla namalanga.
Ikhansela laseWilllowfontein uMnuz Thabiso Molefe selinxuse umphakathi wakule ndawo ukuthi usukume uzimele ekulweleni udaba lokungabinawo amanzi ngoba yena usezamile kodwa wehlulekile.
UMnuz Molefe uveze loku emhlanganweni womphakathi waKwaPhupha nobubanjelwe esikoleni samabanga aphansi iSilwanetshe Primary ngeSonto mhlaka-September 2.
Inhloso yalo mhlangano bekuzodingidwa izinkinga ezibheke nale ndawo ikakhulukazi udaba lwamanzi nosekuphele iminyaka emithathu lo mphakathi ungenawo kodwa uphila ngamaloli athwala amanzi.
Ikhansela lithe selizame laze lahluleka ukulwa udaba lwamanzi. Ube esenxusa umphakathi ukuba usukume nawo uzikhulumele uveze ukuthi ukungabikho kwamanzi sekuwuhlukumeze kanjani.
“Sekuyisikhathi manje sokuthi umphakathi kube iwona ozikhulumela nomkhandlu ngodaba lwenkinga yamanzi ngoba mina sengehlulekile. Ngiyazi akulula ukuvuma uma wehlulekile kodwa mina ngiyavuma ngikwenze konke okusemandleni kodwa akuzange kushintshe lutho.
“Ngiyibambile imihlangano eminingi nezikhulu zomkhandlu bangitshela ukuthi kunezininga ezikhona kodwa ayikho imizamo abaseke bayenza ukuba bazilungise lezo zinkinga. Indlela ekwenzeka ngayo kubukeka sengathi umasipala awuyishayi ndiva inkinga yokuthi lo mphakathi awunamanzi. Umasipala wafika wazohlola ukuthi kungabe yini into edala ukuthi singabi namanzi. Bazithola izinkinga kodwa ayikho into abayenza ukuzama ukuzilungisa.Akwamukelekile neze ukuthi singumphakathi sihlale isikhathi eside kangaka ngaphandle kwamanzi,” kubeka yena.
Uqhube wathi uhlela ukubiza ukhukhulela ngqoqo womhlagano ozobe uhlanganisa umphakathi wonke wase-Willowfontein ngoba akusiyona indawo yakaPhupha kuphela engenawo amanzi.
Uthe kulo mhlangano uzobe ebize iMeya yomasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo kanye nezinye izikhulu zakamasipala ezibhekelele ezamanzi ukuba beze bazophendula ngodaba lwamanzi ukuthi kungabe yini evimbe ukuthi umphakathi ungabi nawo amanzi.
“Kulo mhlangano sizobe singasafuni ukuzwa izincazelo zokuthi yini ebanga ukuthi amanzi angabi khona kodwa sizobe sesifuna ukuzwa ukuthi bathi basivulela nini amanzi.Sesiside kakhulu lesi sikhathi bazi ukuthi asinawo amanzi kumele ngabe sebazilungisa kudala izinkinga lezi abahleli besichazela zona ukuthi zidala ukuthi singabi nawo amanzi.
“Sesilinde kakhulu manje sesiphelelwe isineke sifuna basitshele ukuthi siwathola nini amanzi. Isiyangihlula manje lempi ukuyilwa ngedwa ingako sengidinga abantu abazongisiza siyilwe sonke. Asisebenzisaneni sonke manje ngoba uma singayilwi lento sizosalela emuva ngentuthuko.”
UMnu Molefe uphinde waxolisa emalungeni omphakathi ngokusheshe abize umhlangano ukuzobazisa ukuthi kwenzakala ngodaba lwamanzi. Uthe loku ubekwenza ngoba ubefuna ukuzinikeza isikhathi esanele sokulwa lolu daba kuze kufike lapho esethi uhluleke khona uma kungalungi.
Indawo yakaPhupha akusiyona kuphela ebhekene nenkinga yokungabi namanzi kodwa nendawo yaseBulwer nayo ibhekene nesihlava esifanayo. Amalunga omphakathi aveze ukuthi kwezinye izindawo abuye aphume isikhathi esincane aphinde avaleke nokwenza bazibuze ukuthi kungani ephuma kwezinye izindawo bona bangawatholi. Usuku lomhlangano lusazomenyezelwa.